Abakhiqizi ababolayo kanye nabahlinzeki - China Ifektri eyilahlekayo
Ibhokisi Lekhekhe Lesipho Esenziwe Ngokhuni Esikwele
Le Square Wooden Gift Sushi Moon Cake Box ingumklamo wethu omusha ngo-2021. Ingasetshenziselwa ikhekhe lenyanga, iSushi, ikhekhe noma eminye imikhiqizo yezipho.Izinto zayo zifaka phansi ngokhuni, isivalo sephepha nefasitela le-PET elibonakalayo. Singashintsha futhi iwindi le-PET libe iwindi le-PLA., Okuzokwenza ukuthi konke kubolokile.Manje umhlaba wonke uzokhawulela ukusetshenziswa kwezinto zepulasitiki, ngakho-ke ukukhetha lolu hlobo lokupakisha kuzokwanelisa isicelo samakhasimende. Futhi singaphrinta ebhokisini lephepha elingaphandle nelogo yakho noma omunye umklamo owufunayo. Uma uyayithanda, sicela uxhumane nathi ngokukhululekile.
Isiqukathi sebhokisi leHamburger esilahlwayo esilahlekile
Ama-bioplastics yizinto zepulasitiki ezikhiqizwa emithonjeni evuselelekayo ye-biomass, njengamafutha yemifino kanye namafutha, isitashi sommbila, utshani, izingodo zezinkuni, sawdust, imfucumfucu yokudla esetshenzisiwe, njll. I-Bioplastic ingenziwa ngemikhiqizo yezolimo kanye nakuma-plastiki asetshenzisiwe (okusho amabhodlela epulasitiki. nezinye iziqukathi) ngokusebenzisa ama-microorganisms. Ama-bioplastics ngokuvamile atholakala kokutholakala kukashukela, kufaka phakathi isitashi, i-cellulose, ne-lactic acid. Amapulasitiki ajwayelekile, njengeplastikhi ye-fossil-fuel (ebizwa nangokuthi i-petrobased polymers) atholakala ku-petroleum noma igesi yemvelo.
Isiqukathi Esimbili Sokudla Kwesitashi
Ipulasitiki yommbila yenziwa nge-polylactic acid (i-PLA), okufakwa esikhundleni sepulasitiki, esenziwe ngesitashi sesitshalo esibilile. Iba yindlela ethandwayo epulasitiki yendabuko, etholakala kumakhemikhali asekelwe ku-petroleum.Izinkambu ze-Corn Ukusetshenziswa okwehlukile kwe-polylactic acid kungaba yindlela yokunciphisa umkhondo wekhabhoni oshiywe ngamapulasitiki kaphethiloli.
Ipuleti lokudla lesitashi elilahlayo elibolayo
Ukupakisha kwePolystyrene akukwazi ukuphinda kusetshenziswe kabusha futhi kuzodingeka kulahlwe endaweni yokulahla udoti. Ngakho-ke, sibheke ukusebenzisa izinto zokupakisha ezingaphinde zisebenze futhi ezingaboliseka kalula lapho kungenzeka khona. Ngezinto zokupakisha ezisuselwa kusitashi, umkhiqizo uyaboliseka ngokubola kodwa awuyena owaphansi uma uqhathaniswa nezinto zokwenziwa zepolymer. Ipuleti Lokudla Elilahlwayo Lokuboliswa Kwamanzi aligcini nje ngokwenziwe ngesitashi sommbila, kodwa nangetafula elilahlwayo elenziwe amazambane, isitashi selayisi kanye nesitashi se-tapioca.
Isikhumba se-PBAT PLA Flat Open Biodegradable
Ukusetshenziswa okwandayo kweBiodegradable PBAT PLA Flat Open Bag kusho ukuthi kunentshisekelo enkulu ekusebenziseni izinsizakusebenza ezenziwa nge-bio (ezivuselelekayo) ukwenza le mikhiqizo, noma kunjalo, okwamanje akukho mithetho edinga ukuthi abakhiqizi bamapulasitiki bamemezele ubukhona bemithombo evuselelekayo ngaphakathi umkhiqizo. Noma kunjalo, kunendlela yokuhlola yaseYurophu, ecacisa indlela yokubala yokunquma okuqukethwe kwekhabhoni okususelwa ku-bio kuma-monomers, ama-polymers nezinto zokwakha zepulasitiki nemikhiqizo, ngokuya ngesilinganiso sokuqukethwe se-14C.
Isikhwama Sokuthenga se-PBAT PLA esibolayo
Imfucuza yepulasitiki ikhiqizwa emhlabeni jikelele; imfucuza yepulasitiki yakha iningi lemfucumfucu yolwandle. Ukuphendula lokhu imboni yamapulasitiki inikezela ngemakethe izinhlobo ezintsha zama-polymers abolayo okubhekwa ngabaningi njengokuhlinzeka ezinye izindlela 'ezingayilimazi imvelo' ama-polymeri wendabuko; kodwa-ke, kunenqwaba yamathemu adidayo nezakhiwo ze-polymer ezihambisanayo. Futhi singanikeza nge-Biodegradable PBAT PLA Cornstarch Shopping Bag ukuxazulula inkinga yemfucuza.